အိမ်နားမှာ နေပါတယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » အိမ်နားမှာ နေပါတယ်
Posted by ဂျစ်စူ on Sep 20, 2011 in Aha! Jokes, Satire | 23 comments
Tuesday, September 20, 2011,
Camera မရှိလို့ ..Google ကရှာထားတဲ့ ခရေးရေး.. :D
စောစောစီးစီး.. လမ်းဘေးက ရေအိုစဉ်အောက် မှာ ခလေးတစ်ယောက် ထိုင်ငိုနေတာကို
ကွမ်းရောင်းတဲ့ လူက တွေ့ ပြီး..သူ့ ဆိုင်ဘေး ခေါ်ထားလေရဲ့.။
ခလေး..ပုံစံတွေ့ ရသည်မှာ..စကားတောင် ပီပီမပြောတတ်သေး..တော်တော်ငယ်ဦးမယ်ထင်ပါတယ်…
ပြီးတော့.မျက်ရည်ဝဲတဲ ၀ဲတဲ၊.နှပ်ချေးတွဲလောင်းနှင့် ရေမချိုးပေးထားတဲ့ပုံစံလေး မြင်ရတာတော့ စိတ်မချမ်းသာစရာပဲ။
လမ်းသွားလမ်းလာတွေ၊ကွမ်းလာဝယ်ရင်း တွေ့ မိတဲ့လူတွေကလဲ အမျိုးမျိုးထင်ကြေးပေးပြီး..စပ်စုကြလေ၏
ဒေါ်ညွန့် ဆိုလား..ဘာဆိုလား ခလေးက ပြန်ဖြေလေ၏..
သား… မေနဲ့ဖေ ကော..
၀ါး….အမေ့ဆီပြန်ပို့ ပေး..အိမ်ပြန်ပို့ ပေး…ဆိုပြီး ငါးမိနစ်လောက် ငိုနေလေရဲ့
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လာတာလား….ဘသူတွေ ပါသေးလဲ..
အေးလေး..လာတုန်းက..ညီလေးတွေ ညီမလေးတွေ ကောပါသေးလား..ဘသူနဲ့ လာတာလဲ
ခလေးက ဘယ်လိုမေးမေး..အိမ်ပြန်ပို့ ပေး..အင်း..အိမ်နားမှာကလွဲပြီး..ကျန်တာမပြောတတ်
နှပ်ချေးတွဲလောင်း..နှင့် အမေအဖေ အကြောင်းမေးလျင်..ငိုပါလေရော
ခလေးကို အိမ်ပြန်ပို့ ပေးချင်တဲ့လူတွေကလဲ..ဘာလုပ်လို့ လုပ်ရမှန်း မသိ
ဒီလောက်ငယ်တဲ့ခလေး..ကိုယ့်ရပ်ကွက်ထဲမှာလဲ တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးဘူး….မေးသမျှလဲ ပြန်မဖြေတတ်
လျှောက်ဆော့ရင်း မျက်စိလည်ရအောင်လဲ..လည်ပြီးဆော့တတ်တဲ့ အရွယ်မဟုတ် ဆိုတော့….စဉ်းစားရကြပ်နေကြတယ်
ခလေးစကား နားလည်လို့ လားမသိ…
လာစပ်စုတဲ့လူတွေ အချင်းချင်း ပြန်ပြောပြနေတာတော့..
သူ့ အမေနဲ့ဆိုလားပဲ အတူတူလာတယ်..
အမေက ထမင်သွားယူမယ်ဆိုလားပဲ ..သားဒီမှာခဏစောင့်နေဆိုပြီး ခလေးကို ထားသွားတယ်..ဟုပြောနေကြလေရဲ့
ကျနော်တော့..ခုထိ ပြန်လာမခေါ်တာ မတွေ့ သေးဘူး..
လောလောဆယ်တော့..ကွမ်းယာသည်ကြီးက သူ့ ဆိုင်မှာရောင်းတဲ့ မုန့် လေးတွေ ကျွေး၊ရေတိုက် ထားပေးပါတယ်
လာကြည့်တဲ့လူတွေကလဲ..ခလေးမငိုအောင်..နီးစပ်ရာမုန့် လေးတွေ ၀ယ်ပေးထားပါတယ်..
ကားတစ်စီးကလဲ..ဈေးဝယ်ရင်း..ခလေးကို စပ်စုပြီး မုန့် ဖိုးပေးသွားတာတွေ့ တယ်..
ခလေးကတော့ ၀ါးကုလားထိုင်လေးပေါ်တင်ထားပေးပြီး ခုံပေါ်မှာလဲ မုန့် ထုပ် လေးတွေနဲ့ ထားပေးထားတယ်
ကျနော်လဲ..မိုးနဲနဲရွာလာလို့ .ခလေးကို ချီပြီး အရိပ်အောက် ရွှေ့ ပေးတော့ ခလေးရဲ့..ဖိနပ် နှစ်ဖက် ကျွတ်ကျန်ခဲ့ပါတယ်..
မောင်မင်းကြီးသားလေးက..သူ့ ပစ္စည်းတော့ သိတတ်သား..
ကျနော်လဲ ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုပြီး ဖိနပ်ပြန်ကောက်ပြီး သွားစွတ်ထားပေးခဲ့ရတယ်..
ကျွေးတဲ့မုန့် တွေလဲ အကုန်မစားပဲ တစ်ဝက် ချန်ထားဦးမယ်ဆိုလားပဲ..
ကျနော့်အထင်တော့ တမင်ပဲ ပစ်သွားလေသလား စဉ်းစာမိတယ်..
မပီကလာ ပီကလာ စကားပြောတတ်တဲ့အရွယ်လေး..မိဘက စိတ်ချပြီး ထားမသွားနိုင်လောက်ပါဘူး…
နောက်မှ ပြန်သွားစပ်စုပြီး Confirm လုပ်ပေးပါ့မယ်။
ကျနော်လဲ ငယ်ငယ်က ပျောက်ဖူးတာလေး သတိရမိတယ်
ဦးလေးတို့ ရပ်ကွက်ထဲမှာ ညဘက် ပွဲတစ်ခုရှိတာနဲ့တိုက်.နေတယ်
မဏ္ဍပ်တွေဘာတွေထိုးပြီးလုပ်တာပဲ..ဘာပွဲမှန်းတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး..ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ ဖြစ်ဖို့ များတယ်
အဲတာနဲ့ ..ညဘက်ကြီးညီကို နှစ်ယောက်လက်ချင်းတွဲပြီး ပွဲသွားကြည့်ကြပါရောဗျာ..
မုန့် တွေ လျှောက်စား.ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့ .သွားရင်း..ညီကိုနှစ်ယောက် အဖွဲ့ ..ကွဲသွားပါရော..
ကျနော်လဲ ငိုယိုပြီး..ဟိုဒီ..လိုက်ရှာတာပေါ့..ဦးလေးအိမ်လဲ တစ်ယောက်ထဲ မပြန်တတ်နဲ့ ရယ်..
အဲတာနဲ့ ..ကျနော်ကို လူကြီးတစ်ယောက်က တွေ့ ပြီး အဖေနာမည်မေးကော..
အဖေနာမည်ပြောတော့သူတို့လဲမသိ..ဒီရပ်ကွက်ထဲ မကြားဖူးဘူး..ဖြစ်နေတယ်..
ဘယ်မှာနေလဲမေးတော့လဲ မဖြေတတ်..ဦးလေးအိမ်ပဲ သိတာကိုး..လိပ်စာမှ မသိပဲ
အဲတာနဲ့ ..မဏ္ဍပ်ကိုခေါ်သွားပြီး ကျနော်ရွတ်ပြတဲ့ အဖေနာမည်နဲ့ .လော်စပီကာ ဖြင့်.အော်ပါလေရော..
အဲကျမှ ဦးလေးဖြစ်သူက ကျနော်မှန်းသိပြီး လာပြန်ခေါ်ရတယ်..
အမှန်တော့ မဏ္ဍပ်က..အိမ်နဲ့ က သိပ်မဝေးဘူး..ကိုယ့်ဘာသာ မပြန်တတ်တာ..အဟီး..
အဖေ.အမေ နာမည်လဲ မသိ..နေရပ်လဲ မသိနဲ့ .ပြန်မဖြေတတ်အောင်ကို.တော်တော်ငယ်သေးတာကိုး.
သူ့ မာမား.လာပြန်မခေါ်လျင်တော့..သူဂျီးဆီသာ ပါဆယ်ထုတ်ပြီး ပို့ ပေးလိုက်တော့မယ်..
ကြာလို့ .. :D
သဂျီးမြန်မာပြည်ခဏပြန်လာတုန်းက ရှုပ်ခဲ့တဲ့ဇယားထင်ပြီး သဂျီးကတော်နဲ့ ကွိုင်နေပါဦးမယ်လေးပေါက်ရယ် လူမှုဝန်ထမ်းကျောင်းကိုသာပို့ပေးလိုက်ပါ..
သဂျီးက နဖူးပြောင်တယ်လေ….ဒီခလေးကတော့ မပြောင်ဘူး..
လာပြန်မခေါ်ကြလျင်တော့.မောင်ပေတို့ ရပ်ကွက်ထဲက ဘယာကြော်ရောင်းတဲ့.. ရန်ကနားဆီပဲ
ညှင်းညှင်း ညှင်းညှင်း.. :D
ကိုပေ့ကိုပဲ တိုက်ရိုက်ပေးပြီး မွေးစားခိုင်းတာ ပိုကောင်းပါတယ်
သူလည်းကုသိုလ်ရ၊ သဂျီးလည်း တစ်တောရှင်းသွားတာပေ့ါ
ရန်ကနား ဆီ ပို့ ရင်တော့
အရန်းလန်း ၊ အရမ်းဂွမ်းတဲ့
နှလုံးသားလှ ဆရာမလေး တွေ ရှိတဲ့
ဆေးရုံမှာ ကလေးမွေးရင်လည်း.. မလိမ့်တပါတ်နဲ့.. ကလေးတက်ဆွဲတဲ့သူတွေရှိတာမို့.. ခြေပတ်လက်ပတ်. .အီလက်ထရောနစ်.. အကာအကွယ်တွေ တပ်ရတာပေါ့..။
ပြောရရင်. .မြန်မာပြည်ကကလေးတွေများ..ဥပဒေကြောင်းအရ..တရားဝင်.. ခေါ်မွေးစားလို့ရသလားမသိဘူးနော..။
ကလေးငတ်နေတဲ့.. မြန်မာစုံတွဲတွေအတွက်.. စုံစမ်းကြည့်ဦးမှ..။
ဟုတ်တယ်နော် သူကြီးရေ။သူကြီးခေါ်မွေးစားပေးနော်။သနားပါတယ်။ဒါပေမယ့် ကလေးက
ယောကျာ်းလေးဘဲရမှာနော်။ ဟိ ဟိ
ခုရော အခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲ။ အဲဒီနားက ကွမ်းယာရောင်းတဲ့သူတွေ ခဏထားထားတာလားမသိ။ တစ်ခါတလေ အဲလိုတွေ သူများသနားအောင်လုပ်တာတွေလည်းရှိတယ်။ ပြီးရင် အဝေးကနေ ကြည့်နေကြသေးတာလေ…
ကျွန်တော်လည်း သုံးနှစ်သားလောက်က အမေနဲ့ ဈေးလိုက်
သွားရင်း အမေနဲ့ကွဲသွားဘူးတယ်။ဈေးပေါက်ဝမှာ စောင့်ရင်း
ထိုင်ငိုခဲ့ရတာ။မုန့်ကျွေးမဲ့သူမပြောနဲ့ မေးမဲ့သူတောင် မရှိတာကို
နေ့ ခင်းက တစ်ခေါက်ပြန် စပ်စုတော့..ခလေးမရှိတော့ဘူး..
ခေါ်ထားပေးတဲ့လူတွေလဲသူ့ အလုပ်နဲ့ သူမို့ ..မထိန်းထားနိုင်…
အဲတော့ ရပ်ကွက်ရုံးကို သွားပို့ လိုက်ပါပြီတဲ့..
ခလေးငယ်လေးကို ပစ်သွားတာ သေချာပါဘီဗျာ..
ခုချိန်ထိ ခလေးရဲ့ ဘာသတင်းမှ လာမေးတာ မတွေ့ သေးပါကြောင်း..ဗျာ..
နို့ လေလွင့်ဖြစ်မှာ ဒုက္ခနော်
ကလေးဘ၀ကလဲ အဖြစ်ဆိုးလိုက်တာ။ နောက်ဆုံးအခြေနေလေးသိရင်လဲ တင်ပေးပါအုံးကိုပေါက်ဖေါ်ရေ။
ဟယ် ဖြစ်ရလေ ဘယ်လိုမိဘတွေပါလိမ်.
မိုးမင်းသမီး..နံမည်မှာ ပေါင်းတာ စာလုံးပေါင်းကျနေလားလို့ မမှားဘူးဆိုရင်ထားလိုက်နော်..
ရွာထဲက အသက်တွေသိချင်ရင် ပိုစ့် တစ်ခုမှာ တင်ထားတယ်(ရေးသူ ဆူး) ဘရှာမတွေ့လို့
လင့်မပေးနိုင်ဘူး…. သဂျီးများရှာပေးမလား ချွဲကြည့်ပါလား…..သိပြီးရင်ငြိမ်ငြိမ်နေနော်..
အသက်ဆိုတာ ခဏခဏ မေးရတာ မဟုတ်ဘူးမိုးမမရဲ့…ဟိုဟာကြီးကြားသွားမယ်….တိုးတိုး….
ကလေးလေး အဖြစ်က ရင်မောစရာ။
ရ.ယ.က ရပ်ကွက်ရုံးက တော်တော်ဝေးတယ်ခင်ည..
ခလေးအတွက် ဘာအကူအညီမှလဲ မပေးနိုင်…
လိုင်စင်ရ သတင်းလာထောက်တဲ့ကောင်လဲမဟုတ်..ဆိုတော့ ကျနော့ကို မရက ကြီးက ကောလွှတ်မှာ သေချာတယ်..
ပစ်မထားပါဘူး….အကျိုးအကြောင်း ထပ်သိရလျင် ပြောပါ့မယ်
ပြစ်သွားတဲ့ အမေတော့ မသိပါဘူး ဘေးက ဖတ်ရတဲ့ သူရင်ထဲမှာတော့ အောင့်လို့တောင်လာပါတယ် ကိုယ့်အသဲကပဲ ငယ်နေသလားမသိဘူး ကျောင်းတုန်းက သူငယ်ချင်းများနဲ့ မိဘမဲ့ ကလေးများကို ထမင်းတနပ် သွားလှူဖူးပါတယ် .. ထမင်းမစားခင်မှာ ကလေးတွေ အကုန်လုံး အလှူရှင်တွေကို မေတ္တာ
ပို့ပြီး စားရတာနဲ့ တောင် မတန်အောင် ရွတ်နေတာတွေ့လို့ ထိုင်ငိုပစ်လိုက်ပါတယ်။ အတူသွားတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အကုန် ငိုကြတာပါ။ အဲ့ဒီကတည်းက လှူစရာရှိရင် သွားလှူပါတယ် ။ သူတို့တွေ စားရင် သွားမကြည့်တော့ပါဘူး။ မျက်ရည်မခိုင်လို့ပါ။
မိမရှိ ဖမရှိနဲ့ နေရတဲ့ သူတို့ ရဲ့ မျက်လုံးလေးများဟာ တစုံတခုလိုအပ်နေသလို အမြဲတမ်း ခပ် နွမ်းနွမ်းလေးတွေပါ။ သွားပြီးပြန်လာရတဲ့ အကြိမ်တိုင်း ရင်ထဲမှာ နွမ်းနေတတ်ပါတယ်။ မျက်လုံးထဲမှာလည်း သူတို့ ပုံလေးတွေကို တော်တော်နဲ့ဖျောက်မရပါဘူး။
ပွတ်ရှ် ရေ…. အဘလည်း ကန်တော်လေးနားက ခရစ်ယာန် ဘိုးဘွားရိပ်သာမှာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က
ထမင်းတစ်နေ့စာလှူခဲ့တယ်..ဘိုးဘိုး ဘွားဘွားတွေရဲ့ ထမင်းတစ်လုပ်အတွက် သနားစရာ ဆုတောင်း သံကို ကြားရတာသနားဝမ်းနည်းလွန်းလို့ ယောက်ျားကြီးတန်မဲ့ မျက်ရည်ပေါက်ပေါက်ကျလို့ ဟီးချပြီးငိုခဲ့ရပါတယ်….ပွတ်ရှ် ရဲ့ ဖိလင်ကို ထပ်တူရဘူးတာ..
ရှင်းအောင်ပြော..ရိုက်ပေါက်တိုးအောင် အချွန်နဲ့မ မနဲ့နော်…
တခြားနိုင်ငံတွေမှာ ကလေးမွေးစားတာ ခေတ်စားတယ် .. ဒီနိုင်ငံတွေမှာ ကလေးစွန့်ပစ်တာ ခေတ်စားတယ် .. အဲ့ဒီလိုကွာပါတယ် .. အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့်မွေးခဲ့ရသော်လည်း … စွန့်ပစ်ရက်တဲ့ မိဘတွေကို ကျွန်မတော့ ရွံ့မုန်းမိတယ် … တကယ်ဆိုလျှင် သွေးသားဆိုတာ အားဖြစ်စေပါတယ် … ဘာမှ အသုံးမကျတဲ့ ငမွဲမိဘတောင် ကိုယ့်သားသမီးမျက်နှာနဲ့ အားတင်း အပြင်းနှင် ရုန်းကန်နေကြသေးတာပဲ … ဘယ်လို နှလုံးသားနဲ့ မိဘတွေ ကိုယ့်ကလေးကို ကျီးထိုးထိုး ၊ခွေးစားစားပစ်ရက်တာလဲ
နိုင်ငံခြားက ကလေး မွေးစားတာ လွယ်မလွယ်ကတော့ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းတခုခုမှာ ရောက်နေတဲ့ မိဘမဲ့ ကလေးမှ အလွယ်တကူ ခေါ်မွေးလို့ ရနိုင်မယ် ထင်တယ်။ စာရွက်စာတမ်းက ကိစ္စ တမျိုး စိတ်အေးရမှာပါ။
ဒီမှာ ကလေး ၆လ လောက်ဆို ပက်စပိုစ် ဆိုတာ ကြီး လုပ်လို့ ရပါတယ်။ ကလေး အမေ နဲ့ သော်လည်းကောင်း အဖေ နဲ့ သော် လည်းကောင်း တွဲလုပ်ရပါတယ်။
ဘယ်နိုင်ငံက လ၀က ဖြစ်ဖြစ် ၁၈နှစ်အောက်တွေ မိဘ ရှိတဲ့ ကလေးတွေတောင် မိဘနဲ့ ပက်စပို့ ကိုင်ပြီး ခရီးထွက်ရင်တောင် စာအုပ်အစိမ်းကို ပြူးပြဲပြီး စစ်လိုက်တာ ပြောမနေနဲ့.. အဖေ အမေ နဲ့ ပုံတူကူးပြီး ရုပ်တူနေရင်တောင် အချိန်ရရင် အသားလှီးပြီး ဒီအန်အေ စစ်ပြီးမှ ၀င်ခွင့်ပေးချင်နေတာ.. ဒီနိုင်ငံ တင်မကဘူး တခြားနိုင်ငံကိုပါ အ၀င်ခက်မယ် ထင်တယ်။
သဂျီးတော့.. ရန်ကုန်ပြန်လာတုန်းက ကိစ္စတွေ ရွာထဲမှာ ဗူးပေါ်သလို ပေါ်လို့ ခေါ်ဖို့ စုံစမ်းနေတာ မလား.. ဟွင့်.. ဟွင့်… သဂျီး သမီးလေးတော့ မောင်လေး ရတော့မှာပေါ့။
ကလေးဆိုတာမျိုးက.. အသက်၂-၃နှစ်လောက်ဆို.. လုပ်ပေးရတဲ့…ကရိကထတွေသက်သာသွားတာ.. အပျိုကြီးမမ မသိပဲကိုး..။
ကောက်မွေးစားလိုက်ရင်.. အင်မတန် ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အရွယ်ပေါ့..။